नेपाल आज | पवित्र आमाबाट पवित्र बाबुको वीर्यपान गराईयो भन्ने कुरा पो आयो (भिडियोसहित)
कभर स्टोरी भिडियो स्तम्भहरू इतिहास र अनुभूति
प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी नेपाल आजमा ‘इतिहास र अनुभूति’ नामक भिडियोस्तम्भका स्तम्भकार हुनुहुन्छ । उहाँले यसपटकको कुराकानीमा एसिया प्यासिफिक समिटबाट बढी चर्चा गर्नु भएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग भएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
एसिया प्यासिफिक समिट विवादास्पद भयो । संस्थापक पनि विवादमा परेको छ । एकनाथ ढकाल नेपालमा पदको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत नभए पनि मन्त्री पद पाउने छवि थियो विगतमा । एसिया प्यासिफिक सम्म्मेलन पछि ढकालले ठूलो लगानी गर्दारहेछन् भन्ने देखियो । त्यसको प्रतिफल नै उनी मन्त्री पद पाएबाट स्पष्ट देखियो । सबै नेतालाई एकनाथले खुसी पारेका रहेछन । आजको दिनका लागि विगतमा ठूलो लगानी गरेको अहिले देखियो ।
कर्यक्रमको छवि उज्वल भएको भए भाइचारा अभिवृद्धि गर्न सक्ने थियो । तर यो आफैंमा विवादास्पद भयो । आफैमा बदनाम बनिदियो । नाम सुन्नेबित्तिकै मुख लेप्रयाउने अवस्था आयो । लाभान्वित भएकाहरु खुसी, नभएकाहरु विचार गरेर हेर्ने अवस्था रह्यो । नेपालको बदनामी हुने र प्रतिफल पनि नपाउने अवस्था देखियो ।
समिटको नारा आकर्षक थियो । नारा त मनमोहक जसले पनि बनाउन सक्छ । माओवादीले नै जनयुद्धअघि कति धेरै मनमोहक नाराअगाडि सारेको थियो । लोकतन्त्रकै हकमा त्यस्तै नारा थिए । केप ीओलीले नै आकर्षक नारा दिएर चुनाव जिते । नाराले नै वास्तविकताको उद्घाटन गर्दैन । व्यवहारबाट हेर्दा प्यासिफिक समिट धार्मिक उद्देश्य रहेछ । संस्थापक नै विवादास्पद व्यक्ति रहेछन । एकनाथ ढकाल त धर्मको नाममा राजनीति गर्ने व्यक्ति रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
फादर मुन हामीसँग वाकिफ व्यक्ति होइनन् । यो घटनापछि यिनको नाम जोडिएर आयो । सायद यिनी उत्तरकोरियाली नागरिक हुन् । त्यहाँ यिनले आपराधिक कर्म गरेर जेल परे । त्यहाँबाट फुत्किएर दक्षिण कोरिया पुगे । त्यही उनको स्थायी बसोबास भएको हो । त्यहाँबाट पनि व्यवसायिक कामले अमेरिका पुगे । करछलीको अपराधबाट जोगिन फेरि बन्दी भएका व्यक्ति हुन् । त्यसपछि युनिभर्सल पिस फेडेरेसन स्थापना गरेको देखिन्छ । धर्मको बारेमा बेग्लै बहस गर्न सकिन्छ । क्रिष्चियन धर्म र हालको सम्मेलनको सन्दर्भमा फादरमुनको नाम जोडिन आएकोछ । फादरमुन संदीग्ध हुन् भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै नेपालका लब्ध प्रतिष्ठत व्यक्तिहरु आत्मसमर्पण गर्न जान्छन् भने बहस त्यो विन्दुमा पो हुनुपर्छ होइन र ? भरत दाहालको आधार मान्ने हो भने त पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव पनि यसको मतियार भएर हिँडेको बताउने गरिन्छ ।
धर्म अनेक सम्प्रदायले बनेको हुन्छ । किसिम किसिमका सम्प्रदायका गुरुहरु देखा पर्छन् । भारतमा रामरहिमको नाम चर्चित भयो । उनको नामबाटै डर हुन्छ । उनको नेपालमा संलग्ता देखिएको छ । आशाराम बापु त जेलमै छन् । तिनका कार्यकर्ता त यति माथि कि नेपालका सचिवहरु पनि आफूलाई आशाराममा चेला हुँ भन्न रुचाउँथे । भारतमा चन्द्रास्वामी इन्दिरा गान्धीका धार्मिक गुरु भन्ने गरिन्थ्यो । रामदेवको लीला पनि देखिएकै छ । रामदेवको खुट्टा ढोग्ने पनि यिनीहरु नै हुन् । मुनको नाम मात्रै किन विवाद ? उनीबाट लाभ लिएकाहरु एक खाले कुरा गर्छन् । लाभ नपाएकाहरु अर्को कुरा गर्छन् । हामीले त तथ्य थाहा पाउन जुरुरी छ ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले तक्मा विभूषण लिनु पर्छ सरकारको निर्णय लिनु पर्ने उल्लेख छ ।केपी ओली ले कुनै रित पूरा नगरी १ लाख डलरकोृ पुरस्कार लिए । एक निरिह कर्मचारीले चाहिँ त्यसरी तक्मा लिए भने खोसिन्छ ।
एकनाथ ढकालको कुरा सुन्दा यस्तो कार्यक्रम अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत मुलुकमा भएको छ । नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्री सहभागी भएका रहेछन् । विश्वहिन्दु महासंघको संस्थापक अध्यक्ष नगेन्द्रप्रसाद रिजाल नै यसमा सहभागी भएका रहेछन् । प्रतिपक्षी दल त बोल्दै बोल्दैन । कुरा के हो त ? खोजी आवश्यक छ ।
त्यो दिनको एक पत्रिकाले होलीवाइन पिलाएको, जोडीहरुलाई आशीर्वाद दिएको कुरा लेख्यो । अर्कोले त्यस्तो केही नभएको लेख्यो । यसकारण केही विवाद पनि देखियो । होली वाइनमा फादरमुनको वीर्य पनि मिसाइएको भन्ने कुरा सुनियो । यस्तो हो भने त खत्तमै भयो नी त । नेपालका प्रतिष्ठितहरुले पनि त्यस्तो वाइन पिए भन्ने कुरा आयो । यस्तो हो भने त लास्टै भयो नी । यस्तो किसिमको नग्नता किन देखिएको छ । यो बुझ्न सकेको छैन मैले । नेपालमा बलियो अभिभावक भएन । राष्ट्रपति आफ्नै स्वार्थ सुविधामै व्यस्त भइन् । कम्युनिष्टले विगतमा हामीलाई धर्म अफिम हो भनेर सिकाए ।
अहिले कम्युनिष्ट नेताहरु नै वीर्यपान गरिरहेको सुनिन्छ । नेपालीहरुको लागि यो लज्जास्पद कुरा हो । धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा यो भन्दा पनि हिजो राष्ट्राध्यक्षहरुले जे जे गरे त्यो नमिल्ने हो । कुनै खास धर्मको धार्मिक गतिविधि राजकीय हैसियतमा गर्न नहुने सिद्धान्त हो । तर यहाँ त गरेका छन् । पशुपति पनि जाने, कुमारीको भोटो हेर्न पनि जाने गर्नु हुँदैन । धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देशमा किन नपाउनेभ भन्ने छ । तर यो गलत हो । सरकारकै लेटर प्याड प्रयोग गरेर हालै ४४ देशका मानिसलाई बोलाइयो । पहेलो लुगा लगाएका पण्डीत पनि त्यहाँ थिए ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष भयो भनेर उफ्रिने, पहेलो लुगा लगाउ (दामोदर गौतम)ंने अनि क्रिष्चियनको कार्यक्रममा भाग लिनेहरुको धर्म कसले बचाइदिनु पर्ने हो ? गोविन्द टण्डनले ? जो आफै हिजो पशुपतिको सदस्य सचिव भएका थिए ।
धार्मिक सांस्कृति हस्तक्षेप भएको कारण यहि हो । नेपालका आधिकारिक संस्थाले भारतीय हिरोइन चाहिन्छ । नेपालमा राजेश हमाल, भुवन केसी छैनन् ? रेखा र करिश्मा छैनन् ?
रोहिंज्याको शरणार्थी बोझ हामीमाथि छ । उनी आउँदा गौरव होइन, अपमान हुने हो । उनी विश्वराजनीतिबाट बहिष्कारमा परेकी नेतृ हुन् आजको दिनमा । भुटानको राजाले नेपाली लखट्यो । नेपालको राजा चाहिँ भुटानको राजालाई स्वागत गर्थे । त्यसकारण म आफै के भन्न चाहन्छु भने यस्तो किसिमको कार्यक्रम निर्विवाद सम्पन्न गर्नुपर्छ । विवाद हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु हुँदैन । विश्वभरका मानिस नेपाल आएपछि हामीले उनीहरुविरुद्ध गाली गर्दा नराम्रो सन्देश जान्छ । पाहुनालाई दुत्कार्ने हाम्रो संस्कार होइन ।
यस्तो कार्यक्रमबारे पहिले नै खुलस्त जानकारी हुनु राम्रो हुन्छ । यहाँ त मुलुकभरका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई दम्पत्ती नै आउन आग्रह गरियो । अनि पवित्र आमाको हातबाट पवित्र बाबुको वीर्यपान गराईयो भन्ने कुरा पो बाहिर आयो ।
एउटा एनजिओको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री किन यति धेरै नतमस्तक भए भन्ने कुरा उदेकलाग्दो छ । हिजोसम्म त यिनीहरु एनजिओलाई तह लगाउछु भन्ने गर्थे । अहिले लाचार हुनुको कारण यस्तो रहेछ । कार्यालयबाट नै छुट्टी लिएर एउटा होटलमा बस्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको शैली अनौठो छ । समय र पैसा जोगाउन सोल्टीमा बसेको भनियो । त्यसका लागि त हामीले बालुवाटार बनाइदिएको हो । एकातिर जनतालाई सास्ती हुन्छ भनेर होटलमा बसेको भन्ने अर्कोतिर विद्यादेवी भण्डारीको सवारीमा एम्बुलेन्सलाई समेत जान नदिएर सुत्केरीको मृत्यु भएको हामीलाई थाहा छैन र ?
मानिसहरुले अनेक टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो सम्मेलनको निर्णय जेठमै भएको रहेछ । त्यो कुरा किन नभनेको समयमै । यो सरकार डेमोक्रयाटिक भएको भए पाहुनाको छेउमा यति गाईजात्रा भयो । हाम्रो त राष्ट्रिय चरित्र बद्नाम भयो । आङ साङ सुकी अमेरिका जान सकेकी छ्रैनन् । त्यस्तीलाई नेपाल ल्याउँदा के गौरव होला र ?
यो धार्मिक हो भने यसको एक खाले प्रभाव हुन्छ । अर्को विषय संवैधानिक पनि भयो । विधान मिचेर विदेशीको पुरस्कार ग्रहण गरियो । २ नम्बरको मुख्यमन्त्रीलाई अमेरिका जान नदिने यिनीहरु नै हुन् नी त । यस्तो पृष्ठभूमि विगतमा छ । भिसीलाई एअरपोर्टबाट फर्काइयो । एक नम्बरका मुख्यमन्त्री सोध्दै नसोधी अमेरिका पुगे । भोलि अर्को खालकाले यस्तो सम्मेलन गर्छौं भन्लान् । सरकारले के गर्ने त ? यि खालका प्रश्न भविष्यमा उठ्नेछन् ।
उनी त्यो संस्थाको नेपाल प्रमुख हुन् । यसकारण उनी तत् सम्बन्धी काम गर्ने छन् । नेपाल सरकारलाई प्रभावमा पारेर काम गरे । उनले त सक्षमता देखाए । यस्तो गर्नै थियो भने पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एउटा पात्र खटाएर अरु काम गर्नु पर्ने थियो । तर सिंगो क्याबिनेट संलग्न भयो । देशभरका उनीहरुका कार्यकर्तालाई वीर्यपान गर्न ह्यात पठाइयो । हिजो आमाको किरिया नगरेको आरोप माधवकुमार नेपालमाथि लाग्यो । आफ्नो धर्मलाई निरपेक्ष बनाएर सक्ने, अर्कोको धर्मको मञ्चन गर्ने काम भयो । यो त धर्मघात हो । घनश्याम भुषालले आउने सन्ततीका लागि यो घातक हो भनेका छन् ।
धर्मको आवरणमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने पात्रको रुपमा म उनलाई लिन्छु । उनी चतुर खेलाडी लाग्यो । प्रश्न एकनाथ हुँदै होइनन् । उनले दिएको पैसा गोजीमा हालेर कोरिया भ्रमणमा जानेहरु गलत हुन् । यस्ता मान्छेको मुनी बसेर प्रायोजन गर्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएका मान्छेले सोच्नु पर्छ ।
सबै यस्तै सुनिन्छ । जेएनयुमा पढ्नेहरुलाई पनि यिनैको संस्थाले पैसा दिने गरेको सुनिन्छ । मानौं हामी विश्व हिन्दु सम्मेलन गर्र्छौैं भने माधव नेपालले अध्यक्षता ग्रहण गर्छन् त ? केपी ओली चार दिन सोल्टी होटलमा बस्छन् त ? धर्ममा त म निरपेक्ष मान्छे हुँ । तर हिन्दुधर्मावलम्वीहरु प नि त छन् । यहाका क्रिष्चियनहरु पनि प्रशन्न छैनन् ।
उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ
योगी क्षेत्रीय रुपमा आउने हुन् । केपी ओलीले यहाँ प्रधानमन्त्रीले जे गरे मदर मुनको सवालमा, जनकपुरमा लालबाबु राउतले ठ्याक्कै त्यही गरे भने के होला ? यिनीहरुले के भन्छन् होला ? प्रदेश २ का हिन्दुहरुले योगीको स्वागत गरेर केन्द्रलाई ‘तिमीहरुका गुरुको वीर्य खाँदा पनि हुने, हाम्रा गुरुको स्वागत पनि गर्न नहुने ? ’ भन्ने प्रश्न गरे भने के होला ?